Feiyu WG2 သည်ရေစိုခံအားကစားကင်မရာများအတွက်တည်ငြိမ်စေသည့်အရာ Gadget သတင်း
Feiyu WG2, ရေစိုခံအားကစားကင်မရာများအတွက်တည်ငြိမ်မှု
Ruben gallardo | | ပစ္စည်းများ
အာရှကုမ္ပဏီ FeiyuTech ကိုစတင်မိတ်ဆက် အားကစားကင်မရာများအတွက်တည်ငြိမ်မှု - သို့မဟုတ် gimbal။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အစွန်းရောက်အားကစားလေ့ကျင့်စဉ်သို့မဟုတ်မိုးရွာသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားသောဓါတ်ပုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးလှုပ်ရှားမှု (သို့) တုန်ခါမှုလျော့နည်းစေသည်။
အစွန်းရောက်အားကစားလေ့ကျင့်နေစဉ်တွင်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏အောင်မြင်မှုများကိုအမှတ်ရလိုကြသည်။ အကောင်းဆုံးနည်းကတော့လက်ကိုင်ဖုန်းမဟုတ်ဘဲအားကစားကင်မရာဖြစ်တယ်။ ဈေးကွက်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသော်လည်းလူကြိုက်အများဆုံးမှာ GoPro ဖြစ်သည်။ ဤနှင့်အခြား Xiaomi ကင်မရာများအတွက် FeiyuTech ကုမ္ပဏီသည်ရေကိုခုခံနိုင်သော gimbal တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူ့နာမည်က Feiyu WG2.
ဒီ gimbal ပေါ့ပါးသည် (300 ဂရမ်ထက်နည်းသည်) နှင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် 2,5 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင် Feiyu WG2 သည်မည်သည့်အခြေအနေနှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ကွဲပြားခြားနားသောတောင်များနှင့်အတူပါရှိသည့်ဂင်ဘောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကဲ့သို့သောအလေ့အကျင့်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ် စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခြင်း၊။ သင်ရောက်ရှိနိုင်သောအတိမ်အနက်သည် ၀.၅ မီတာဖြစ်သည်ကိုသင်အမြဲမှတ်သားရမည်။ အားကစားကင်မရာများအတွက်ရေသို့မဟုတ်ရွှံ့ဖြန်းခြင်းများသည်ဤတည်ငြိမ်မှုအတွက်ပြaနာမဟုတ်ပါ။
El Feiyu WG2 ကိုစတီယာရင်၊ စက်ဘီးလက်ကိုင်ကြိုး၊ သံခမောက်လုံး၊ ရင်ဘတ်ပေါ်ဝတ်ဆင်ရန်။ FeiyuTech သည်မိုဘိုင်း application တစ်ခုကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည် gimbal နှင့်စမတ်ဖုန်းကို Bluetooth နည်းပညာမှတစ်ဆင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည်မှတ်တမ်းတင်လိုပါက၎င်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည် အချိန်ကြာရိုက်ကူးမှု 360 ဒီဂရီ၌တည်၏။
Feiyu WG2 ကိုယခု ၀ ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အွန်လိုင်းစတိုးသို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင်သည် Amazon ကနေတဆင့်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဈေးနှုန်းကမသက်သာဘူး 299 ယူရို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » Feiyu WG2, ရေစိုခံအားကစားကင်မရာများအတွက်တည်ငြိမ်မှု
ကမ္ဘာကိုဖျက်ဆီးရန်ခြိမ်းခြောက်သော AI စက်ရုပ်ဆိုဖီယာသည်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခဲ့သည်